Tinye ebe nrụọrụ gị na saịtị gị na KML Njikwa | Martech Zone
Nwere ike ịmaghị nke a, mana Google ga-edepụta ọnọdụ mpaghara saịtị gị yana ibe gị ndị ọzọ. Enwere ike ime nke a site na ịnye a KML faịlụ na nhazi gị na ụdị XML - usoro nke dị mfe ịgụ site na mmemme mmemme.
Ekwela ka nke a menye gị ụjọ! Ọ dị mfe iji wuo faịlụ KML ma tinye ya na saịtị gị. N'ezie, enwere m weebụsaịtị nke ga-ewulite faịlụ KML gị ka ị nwee ike ibudata ya, Adreesị Adreesị. M gbakwunyere atụmatụ maka nbudata taa!
Mee KML faịlụ dị mfe:
Tinye adreesị gị na Adreesị Adreesị ma nyefee onwe ha. Ọ bụrụ na ebe dị na maapụ ahụ ezighi ezi, ịnwere ike ịdọrọ akara gị gaa ebe ahụ (ọ mara mma, ọ bụghị?). Ugbu a ị ga-ahụ njikọ “Budata” na aha ngalaba KML. Mgbe ị pịa nke a, ịnwere ike ibudata faịlụ iji bulite na saịtị gị mgbe e mesịrị.
M ga-edezi faịlụ ahụ (jiri ihe ndezi ederede ọ bụla) ma gbakwunye aha blog gị n'etiti mkpado nkọwa. Ihe Nlereanya:
Aha saịtị m> / nkọwa>
Tinye KML na Saiti gị:
Ọ bụrụ na ị na-agba WordPress, ị ga-agba ọsọ ahụ XML Sitemap Generator ngwa mgbakwunye by Arne Brachhold - ị gaghị achọta ngwa mgbakwunye dị mma ma ọ bụ karịa dị mkpa n’ebe ọ bụla! Otu n'ime ọtụtụ atụmatụ dị ukwuu nke ngwa mgbakwunye a bụ na ị nwere ike itinye faịlụ KML na ya. Naanị tinye URL zuru ezu nke saịtị saịtị na ngalaba ndị ọzọ:
Ọ bụrụ n’inweghị WordPress, ị ga - ahụ ntuziaka na Google ka ị ga - esi tinye akara KML gị na saịtịmap gị.
Ọ bụ ya! Rụpụta faịlụ KML, bulite faịlụ ahụ na saịtị gị, ma tinye ya na Sitemap gị.
Tags: alageolocationkmlobodo seomap
Ọ dị mma, yabụ ka anyị mee ka a ga-asị na m nwere saịtị maka Spinal Decompression na adreesị m dị na Chula Vista. Ọ na-esiri m ike ịkwado maka San Diego n'ihi na adreesị m na-egosi na anọghị m. Ọ bụrụ na m gbanwere faịlụ KML m http://www.addressfix.com/ ma kpalie ya na San Diego, mgbe ahụ ka ị na -ekwu ya ka m kwesịrị inwe obere nsogbu ogo maka “spinal decompression san diego?
Aug 6, 2008 na 1:08 PM
Hypothetically, ee. Agụbeghị m n'ime ole ọdịdị ala amalitela ịtụle nsonaazụ ya, mana Google na-aga n'ihu na-akụzi algorithms ha iji chọta nsonaazụ ndị mmadụ na-achọ onwe ha na ihe ndị ọzọ na-ewu ewu. Nwale bu uzo esi choputa!
Roger Kondrat kwuru
Sep 4, 2011 na 4: 52 AM
Hey òtù ekele maka ozi a dị ụtọ na KML. Anọ m na-eche banyere ya taa maka onye ahịa ma chọọ njikọ abụọ ahụ na ozi izugbe ị tinyere ebe a. Amaghị m ebe ọ ga - eduga na ndụmọdụ m nye onye ahịa, mana echere m na ị nyeere m aka ịmalite.
Cheers (na Daalụ!)
Sep 4, 2011 na 4: 56 AM
Bet nzọ! Obi dị gị ụtọ na i wepụtara oge mee ka anyị mara.